Abukar Arman: Axdifurkii Farmaajo ee Ummadda Soomaaliyeed – Radio Daljir
Siteenbar 27, 2017 2:49 b 0
Dowladda Soomaaliya waxa ay shacabkeeda isugu dartay axdifur iyo khayaano markii ay sarkaalka ONLF Cabdikariin Shiikh Muuse u gacangalisay Itoobiya.
Qoraalka Abukar Arman wuxuu markii hore ku qornaa afka Ingiriiska, waxa uuna ku soo baxay bogga ALJAZEERA.com (hoos arag). Bahda Radio Daljir ayaa tarjumey.
Horta axdifurka iyo khiyaanooyinku iskumid ma wada aha, isku sina looma wada maleego. Asbuucyadii la soo dhaafay Soomaaliya waxaa dulheehaabayey burbur siyaasadeed oo baaxadweyn oo innaba aan la cabiri karin. Dowladda Soomaaliyeed waxa ay ku kacday fal dadka qaarkiis – xataa kuwii garbaha u ahaa, ay ku timaameen khiyaano qaran.
Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya (NISA) waxa ay muwaadin Soomaaliyeed, oo hadana ah sarkaal bilado ku taxanyihiin, ahaana geesi ku dhaawacmay dagaalkii 1977 lala galay Itoobiya, isla markaasna ahaa sarkaal Jabhadda Xoraynta Ogaadinaya (ONLF), ay si sharcidarro ah ugu gacangalisay Itoobiya.
Khayaanooyinku waa kala daranyihiin e, markii hore dowladdu waaba ay beenisay warka oo dhan, waxa ayna ku tilmaantay “warxumotashiil qaran dumis ah” oo aan dan kale laga lahayn in dowladnimada Soomaaliya lagu burburiyo ma aha e.
Laakiin markii boor, siigo iyo habaas meel kasta isqabsadeen, oo ay rumoowday in Qalbidhagax walaalihiis ay Itoobiya u gacangaliyeen, hadde waa Itoobiyadii arxandarada miiran ahayd oo aan xuquul isnaan iyo garasho walaal midkoodna warkooda aqoon, xanaaqii shacabka Soomaaliyeed sidii uu u biloowday weli waa uu ku karkarayaa, oo waxa uu noqday mid waligiis aan Soomaali horay u arag. Meel kasta waxaa isqabsaday heeso iyo gabayo lagu diidanyahay ficilka madaxweyne Farmaajo, hadde waa isla madaxweynihii bilo kahor durbaanka loo wada tumayey oo la lahaa waa badbaadiyihii qaranka, waa soonooleeyihii qaranimada Soomaaliya.
Ayada oo xukuumadda Farmaajo ay la tacaalayso si wax la yeelo baa markii danbe RW Kheyre waxa uu isugu yeeray shir Golihiisa Wasiirada. Meeshii laga sugayey war iyo talo suubban, Golihii Wasiiradu arrinkii Qalbidhagax waa sii fogeeyeen, oo si kale ha moodin e, inta ay baasiin ku bilbileen, bay hadana dab qabadsiiyeen. Qalbidhagax waxay ku eedeeyeen in uu yahay argagixiye “Soomaaliya ka galay dambiyo culculus” oo hadana “gacansaar la lahaa Al-Shabaab.” Intaas kaliya ugama aysan harin e, ONLF waxay yiraahdeen, waa jabhad argagixiso ah, hadde waa ONLF adduunka oo dhan looga yaqaan jabhad xorriyo doon ah, xafiisyana ku leh dalalka reer Galbeedka, Bariga Dhexe, iyo waliba Afrika.
Inkasta oo baadigoobka Soomaali weyn iyo in shanta Soomaaliya ay midowdo ay tahay hawl aan dhimasho waxba dhaamin, hadana in qofka Soomaaliga ah loo qareemo, xaqiisa la dhowro, gobolka meeshii uu ka rabo uu si xor ah ugu noolaado, aan la caburin oo aan la ciqaabin waa mid nool oo dareenku u dhanyahay. Waana taas sababta kalliftay in Soomaali oo dhan ay garabistaagto hadafka jabhadda ONLF iyo xoraynta dhulkooda.
Bal hadana aan giraanta dhan kale ka fiirino e, oo aanba aqbalno in Qalbidhagax uu yahay “argagixiso” kan ugu xun, oo Soomaaliya curyaamiyey, dad laayey, oo hadana kufsi ku daray. Intaas oo eed ah oo dowladdu ay soo jeedisay, hadaba xaggee Itoobiya ka soo gashay arrinkan iyo in Qalbidhagax loo gacangaliyo Itoobiya? Maxaa dowladda u diiday in ay Qalbidhagax maxkamad Soomaaliyeed saarto?
Kaba sii daran e, haddii Qalbidhagax uu ahaa danbiile galay dambiyo culculus, maxaa mar hore loo soo qaban waayey oo uu intaas oo sano Xamar ugu dhex noolaa asaga oo ah sarkaal ONLF oo la wada yaqaan? Qalbidhagax nin aan la aqoon ma uu ahayn. Ma uu ahayn nin isqariya. Sidaas darteed, mugdi kuma jiro in go’aanka goluhu gaaray ee ahaa in Qalbidhagax gacanta laga saaro Itoobiya uusan ahayn mid si fiican looga baaraandegay.
Shaki kuma jiro haddii aysan dowladdu dib-ula-noqon eedda siyaasadaysan ee Qalbidhagax, oo aan isla markaasna si qoto dheer sharciga loo waafajin, in hadhow qof kasta oo taageera ONLF, af iyo addin, in isna isla markiiba inta gacanta lagu soo dhigo loo dhiibi doono Itoobiya, asaga oo ah eedaysne “gargaare” argagixiso.
Been iyo Khiyaano
Soomaaliya waxa maanta haysta iyo sida ay Soomaaliyi maanta ajaaniib magan ugu tahay si aad u fahamto waxaad sawirataa diyaarad-qaade dagaal oo aad u weyn. Waxaad kale oo sawirataa in madaxweynaha Soomaaliya uu asna dushaas sare ee diyaaraduhu ka duulaan uu saaranyahay, loona oggolyahay in uu hadba dhinaca uu rabo uu u ordo, sidii uu rabana u ordo, maxaa yeelay wixii uu dushaas sare ka sameeyo, orad iyo fadhi kuu rabo ha ahaado e, ma aha mid badali kara xawliga uu diyaarad-qaaduhu ku socdo ama jihada uu abbaarayo.
Toban sano in ka badan baa saas iyo si ka sii liidata Soomaali lagu hayey, Madaxweyne kastana loo fashilinayey. Waxaa mid kasta lagu soo xerogaliyaa 3 qodob oo wada been ah, oo hadana kala daran: amni been ah, xushmad been ah, iyo xil been ah. Haddii aan si kale u iraahdo, madaxweynaha inta dusha sare ee diyaarad-qaadaha la saaro baa la yiraahdaa hawsha u labiso, hadde waa hawl uusan waxba ka badeli karin iyo markab uusan dhinacna u leexin karin.
Ammuurtaan Qalbidhagax waa mid faa’iido u ah Itoobiya, laakiin Itoobiya kaliya ma aha ee waa mid u roon hay’daha fashilmay oo dhan: UNSOM, AMISOM, inta sirta ku shaqaysata iyo dhiigmiirato oo dhan oo aan rabin in Soomaaliya waxba iska badalin – ayna ugu horreeyaan Imaaraadka iyo wiilka Erik Prince ee shirkadda Blackwater iyo iskaashiga maamulka dekedaha.
Farmaajo ma la Badbaadin Karaa?
Intiina taqaan madaxweynaha cusub (oo qoraangaan ku jiro) waxay awal kalsooni ku qabeen in uu yahay madaxweyne umadda u horseedi doona dib-u-heshiisiin dhab ah, oo soonoolayn doonaa qaranimadii Soomaaliya. Farmaajo waa uu ka duwanyahay madaxweynihii hore oo waxa uu leeyahay khibrad siyaasadeed, waxa uuna ku darsaday hanashada maanka shacabka.
Madaxweyne Farmaajo kama ay dahsoonayn muhiimadda in sannadka ugu horreeya la helo isbaddal dhab ah. Ma uu rabin in waqtigaas qaaliga ahi uu ka khasaaro ama fursaduhu ay ka qalloocdaan. Waxaa la filayey in uu dhiso guddi madaxbannaan oo dib-u-heshiisiin, kana kooban muwaadiniin dalka magac ku leh, siyaasadana aan ku labnayn; waxaa la filayey in uu baarlamaanka ka dhaadhiciyo dhismaha maxkamad dastuuri ah; waxaa la filayey hirgelinta guddiga ladagaallanka musuqmaasuqa; waxaa laga sugayey dhismaha sirdoonka ciidanka qalabka si loola socdo milateriga ajaaniibta iyo kooxaha hubaysan ee dalka ka hawlgala; waxaa la sugayey in uu Somaliland u gacan haatiyo.
Bishii Febraayo ee la soo dhaafay waxaan madaxweynaha cusub ku tilmaamay “horseedka wadanimada iyo bidhaanka soonooleynta sharaftii iyo qaranidamii daxalaystay ee dalka.” Laba asbuuc kabacdi waxa uu Raysal Wasaare u magacaabay nin shirkadda Soma Oil and Gas marna shaqaale ka ah, marna ka mid ah dadka iska leh. Qoraal ku qoran far waaweyn baa ii bidhaamay, saas oo ay tahayna waxa aan isku qanciyey in aan madaxweynaha fursad kale siiyo.
Todoba bilood oo ismuujin aan wax kale wehelin kabacdi, Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisu waxa ay ku caanbexeen sida shacabka, siiba da’yarta xamaasadaysan, loo deeqsiiyo hadalo waaweyn oo meel loo raaco aan lahayn, sida caddaalad, nabad, iyo xisaabtan. Waxaaba caado noqotay in aad maqasho Madaxweyne Farmaajo oo ku hadaaqaya: “dowladaydu waa dowladdii shacabka. Dowladdu waxay ay u taagantahay danaha shacabka.” Saas oo ay tahay, markii shacabku kaceen oo dowladda ay ka dalbadeen in ay sharraxdo arrinka Qalbidhagax waxaa la waayey hal qof oo dowladda u hadla, madaxweynuhu asna aamus buu xal biday. Illaa iyo hadda Farmaajo ma uu soo saarin hal kalmad iyo hal sadar oo ku saabsan fadeexadda Qalbidhagax. War kale ma harin e waxaa la dhihi karaa qowljabka iyo axdifurka Farmaajo waxaa u sii dheer asaga oo ku dhexdhacay boosaneerada ay ku ururaan axdifurada xafiiska madaxweynaha. Farmaajo waxaa liqday siyaasaddii Soomaaliya loo maleegay ee ahayd dowlad la’aan ama ka daran. Intaas oo guuldarro ee Soomaaliya loo maleegay, Farmaajo maanta asaga ayaa taariikhda ceebtiisa gacantiisa ku qoranaya, asaga oo noqoya madaxweynihii ugu horreeyey oo dadkiisa isugu dara qowljab iyo khiyaano aan horay loo arag, loona odorosin.
Xaalku sida uu maanta yahay, waa haddii aan mid Rabbaani ahi iman, doorka kaliya ee noo furan waa Baarlamaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha Baarlamaanku waxa uu magacaabay guddi ka soo baaraandega hawsha taagan. Ummadda Soomaaliyeed ayana waxa ay sugayaan bal in xildhibaanadoodu ay si hufan oo cadaaladi ku dheehantahay xilkooda u gutaan.
Qoraalka oo ku qoran afka Ingiriiska hoos riix.
Abukar Arman: Farmajo’s Betrayal of the Somali People
Siyaasadda & Dhaqaalaha 368 Wararka 11625